Bhenefiti uye zvinopesana neacaculture -I- | Green Renewables
Bhenefiti uye zvinopesana neacaculture -I-
Takatarisana nehurombo hwe dzakasiyana-siyana marine, wadii kutendeukira kune aquaculture? Mazhinji esalmoni anotengeswa kuGerman anobva ku aquaculture. Nekudaro, tsika iyi ine zvipingaidzo zvakakomba, vafudzi vanowanzo shandisa zvinodhaka uye mvura inoshatiswa nemarara ehupenyu. Kunyangwe zvese, dzimwe nyanzvi dzinogutsikana kuti mapurazi emvura haangori nzira yekuchengetedza makungwa chete, asi zvakare nzira yekusimudzira vanhu. chizvarwa nyika inoramba ichiwedzera.
1 Kunobva protein
2 Imwe muhove mbiri inouya kubva kugungwa
3 Muitiro unowedzera kushoropodzwa nevanoona nezvezvakatipoteredza
In the kudya munhu, hove ndiyo inotungamira pasi rese kubva kune mapuroteni, pamberi pehove uye nyama yenguruve. Muchokwadi, nhasi zvinobvumidza 17% yevanhu kuti vafukidze izvo zvakakosha zveprotein zvavanoda. Mumakore gumi kusvika gumi nemashanu, chinodikanwa chichave chakawedzera ne 10. Pasina aquaculture, hazvigoneke kupindura kune zvinodiwa protein yehuwandu huri kuwedzera. Aquaculture zvirokwazvo inobatsira zvakanyanya kupfuura kurima nguruve kana mombe, nekuti hove uye zvimwe zvipuka zvemumvura zvinodya zvishoma pane hove. mhuka yepanyika.
Kugadzira kilo ye nyama yemombe semuenzaniso, zvinotora kakapetwa kagumi chikafu kupfuura kugadzira kiropu yekarp. Hove dzinonyatsoshandisa simba shoma pane hove. mhuka yepanyika, Uye izvi nekuda kwezvikonzero zviviri. Kune rimwe divi, imhuka dzinotonhora-ropa, tembiricha yavo yemukati inoenderana chaizvo neiyo nharaunda yavanogara. Uye kune rimwe divi, kufamba munzvimbo yemumvura kunoda kushanda kushoma.
Imwe muhove mbiri inouya kubva kugungwa
Sekureva kweUnited Nations Chikafu neZvekurima Sangano, hafu yehove dzinozviita pamahwendefa edu nhasi hadzisi hove dzemusango. Zvisinei, kukosha kwe aquaculture inosiyana nyika nenyika. Pakati peEurope, sekuGerman, hove dzemusango ndidzo dzinotsvakwa zvakanyanya. Nekudaro, kuChina, aquaculture itsika yekare-kare kutangira mukutanga kwedzimba dzehove. matende. Kusvika nhasi, China pasina mubvunzo ndiyo nyika yekutanga mukati meiyi subsidiary, ichipa dzinenge zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvehuwandu hwepasi rose hwekugadzirwa kwehove aquaculture.
Muitiro unowedzera kushoropodzwa nevanoona nezvezvakatipoteredza
As the heretsika nemagariro painenge ichikura, inomutsa kushoropodzwa nekuwedzera kubva kune vezvemamiriro ekunze, nekuti yakawedzera dambudziko rekunyanyisa kubata hove pane kuigadzirisa. Chokwadi, mhando zhinji dzinovenga dzinodya, uye dzinodya kune dzimwe mhando dzinobatwa mukati medio dzinongoitika. Kurima tuna yeacaculture ndiyo inonyanya kukanganisa, nekuti kusiyana nesalmoni, iyi mhando haigone kubereka mukutapwa. Varimi saka vanobata madiki tunas emusango vovadyisa nawo hove zvinodhura kubatwa mugungwa. Yakavharirwa mumakeji, tunas haina mukana wekuberekana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Ecology » Kurima kwezvakatipoteredza » Bhenefiti uye zvinopesana neacaculture -I-
80% yemvura yemuChina yemvura yakasviba zvakanyanya kuti idhakwe
Tiger yakazivisa kutsakatika muCambodia